Huawei na nsọpụrụ: Otu esi zoo ọkwa na ekwentị | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Huawei, Gam akporo Ndị aghụghọ
Ọtụtụ ụdị dị na gam akporo ugbu a na-eji ọkwa na ekwentị ha. Ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa na ekwentị, n'usoro niile, dị ka anyị hụworo izu ndị a. Ebe ọ bụ na ọbụna ntinye ụdị dị ka Huawei na Honor na-eji ya na ihuenyo ya. Anyị na-achọta ọkwa dị iche iche taa, site na kpochapụwo nke buru ibu karịa ndị ọzọ n'ụdị mmiri mmiri, nwere ọgụgụ isi karịa.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ewu ewu, ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere obi ụtọ na ọkwa ahụ. Karịsịa ebe ọ bụ na ọ na-emetụta mpaghara ngosi n'ọtụtụ ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị nwere Huawei na / ma ọ bụ Sọpụrụ ekwentị, tozọ iji zoo ọkwa a dị mfe.
Ntughari ohuru nke EMUI webatara oru nke na-enye ohere zoo notch na ekwentị. N'ụzọ dị otú a, ihuenyo ekwentị na-eme ka ọ gbanwee obere ọdịdị ya n'elu. Ya mere, ndị ọrụ nwere ekwentị site na ụdị dị ka Huawei na Honor, ọ dị mfe.
Ihe mbụ ị ga-eme bụ tinye ntọala ekwentị. N'ime ntọala anyị hụrụ ọtụtụ nhọrọ, agbanyeghị na anyị ga-abanye na ngalaba akpọrọ Screen. Ọ bụ na nkebi a ebe enwere ngalaba dị iche iche ga - enyere gị aka ịhazigharị ngwaọrụ ngwaọrụ.
N'akụkụ a nke ihuenyo anyị ga-ahụ nke ahụ enwere nhọrọ akpọrọ Notch. Nke a bụ akụkụ nke Huawei na Honor phones ga-ezo kwuru notch. Ihe nkịtị bụ na enwere nhọrọ abụọ n'ime ya, lee ọkwa ma ọ bụ nhọrọ iji zoo ya. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ zoo, naanị ị ga-ahọrọ nhọrọ ahụ.
Ọ bụ ụzọ dị mfe iji zoo ọkwa a na ekwentị Huawei na Honor, ọ dịghị mkpa ịwụnye ihe ọ bụla. Yabụ, ọ bụrụ na ịchọghị ọkwa ahụ, ị ​​gaghị enwe nsogbu mgbe ị na-eji ekwentị gị oge niile. Gịnị ka unu na-eche banyere notch?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Gam akporo Ndị aghụghọ » Otu esi zoo ọkwa na Huawei na Honor ekwentị
Honor 20 agbaala kpamkpam: mara nkọwa ya [+ ezigbo foto]
Gugul na ewebata mgbasa ozi ichoputa